Artikaly " Journey-Assist - Antartika, Mponina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Tendrontany Avaratra
Ny Arctic dia matetika mifandray amin'ny North Pole. Ny habakabaka midadasika dia voahodidinin'ny ranomasina iray fehezin'ny ranomandry mandrakizay. Ny faritry ny planeta avaratra amin'ny planeta Tany dia ny Arktika.
Ny anarana hoe Arctic dia avy amin'ny grika hoe "arctos", izay midika hoe "orsa", satria ny kintana dia ny Ursa Major dia hita manerana ny faritra. Ny kintana avaratra ao amin'ity atiny ity dia manondro hatrany avaratra na aiza na aiza misy anao.
Ny velarantany Arctic dia manodidina ny 27 tapitrisa kilometatra toradroa, i.e. 5,2% amin'ny faritry ny tany. Ny Arctic dia mitoka-monina ho ampahan'izao tontolo izao. Tafiditra ao amoron'ny kontinanta any Amerika Avaratra sy Eurasia, ny ankabeazan'ny Oseana Arktika misy nosy, ny faritra akaikin'ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasimbe Pasifika.
Ny faran'ny faritanin'ny Artikety dia mifamatotra amin'ny sisiny atsimon'ny faritra tundra. Indraindray ny Arctic Circle dia raisina amin'ny sisin'ny atsimo amin'ny Artika, ary avy eo 21 tapitrisa kilometatra toradroa ny totalin'ny faritra.
Ny fanamarihana voalohany voasoratra momba ny Artika dia tamin'ny taonjato faha-4. BC Avy any Marseille ny sambo grika Pithaeus dia nankany amin'ny tany lavitra an'i Tula, izay mety ho lavitra ny faribolan'i Artikety.
Ny Arctic dia tany be orampanala mahafinaritra sy ranomandry ary biby masiaka. Faritra iray ho an'ny matanjaka amin'ny vatana sy ny fanahy. Eto, ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny natiora dia mihena.
Manodidina ny 4 tapitrisa eo ny isan ny mponina. Ny mponina ao Arctic dia asehon'ny mponina teratany sy mitsidika azy, ny ankabeazan'ny Eskimos. Ny teratany (olona 30 mahery) no mandrafitra vondrona sy vondrom-piarahamonina, mitahiry ny fomban-drazana, finoana ary miteny fiteny am-polony.
Ny Arctic dia misy ampahany ao amin'ny faritanin'ny fanjakana valo: Norvezy, Soeda, Finland, Danemark, Islandy, Canada, Russia ary Etazonia.
Ao amin'ny faritra ihany koa dia misy tobim-pikarohana an'ny firenena sasany eto amin'izao tontolo izao. Ny Federasiona Rosiana no voalohany nampiasana onjam-drifotra hita teo amin'ny ranomandry, ka nahafahana nandinika ilay faritra nandritra ny taona iray.
Ny Arctic no faritra avaratra indrindra amin'ny Tany. Anisany ny tany Arctic, ny nosy ary ny ranomasina manodidina.
Ny faritry ny rano dia misy ny Ranomasina Arktika miaraka amin'ny ranomasina: Greenland, Barents, Kara, Laptev, East Siberian, Chukchi, Beaufort, faritra avaratry ny Pasifika ary ny ranomasimbe Atlantika. Izy io dia misy ihany koa ny bay Baffin sy Fox, ny sisin-tany sy ny helodranon'ny Archipelago Kanada Arctic.
Anisan'ireo faritry ny tany Arctic, ny Arctic dia misy ny Archipelago Arctic Canada, Greenland, ny archipelago Svalbard, Franz Josef Land, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, New Siberian Islands, Wrangel Island, ary ny morontsiraka avaratr'i Eurasia sy Amerika Avaratra.
Ny ampahatelon'ny faritra dia ny Ranomasimbe Arctic, manasa ny Pole Avaratra. Nandritra ny ankamaroan'ny taona, ny ranomasina dia rakotra ranomandry.
Ny velom-panahin'ireo tany kontinenta dia fisaka, izay aseho amin'ny fisian'ny permafrost.
Ny teboka avo indrindra amin'ny Tendrontany Avaratra - Mount Gunbjörn (3700 m) dia eo atsinanan'ny Greenland.
Ny faran'ny ambany indrindra amin'ny Arctic dia ny Nansen Basin (4665 m ambanin'ny haavon'ny ranomasina).
Ny fiasa voajanahary amin'ny Tendrontany Avaratra dia misy ny fifandimbiasana amin'ny andro polar sy ny alina polar, ny fifandanjan'ny taratra ambany, ny rivotra Arktika miaraka amin'ny maripana amin'ny fahavaratra manakaiky ny 0 ° C miaraka amin'ny mari-pana isan-taona -34 ° C, ny fisian'ireo glaciers, ranomandry ambanin'ny tany ary permafrost an-tanety, rakotra ranomandry amin'ny faritry ny ranomasina, ary koa ny endrika tsy manam-petra. Any amin'ny Tendrontany Avaratra dia miavaka ny faritra voajanahary amin'ny tany efitra sy ny tundra arctic.
Ny Arctic no kontinanta farany be eto an-tany. Ny fanaingoana amin'ny endrika zavona sy ny vovoka maivana dia tsy fahita firy amin'ny toetran'ny Arctic.
Ny faritra Arctic dia mampiseho harena an-kibon'ny tany be dia be: diamondra, volafotsy, volamena, chrome, varahina, nickel, phosphore sy ny maro hafa. Ny Arctic koa dia feno entona sy menaka.
Tao anatin'ny am-polony taona vitsivitsy izay, ny fiovan'ny toetr'andro Artika dia miova. Ny fitomboan'ny mari-pana manerantany dia nitarika ny fihenan'ny volume-dronono. Vokatry ny fiovan'ny toetr'andro ity dia miova ny aretin-dranomasina ao amin'ny Ranomasimbe Arctic, izay mety hisy fiantraikany tsy ny Arctic irery ihany, fa koa ny toetran'ny planeta manontolo.
Amin'ny toetran'ny Tendrontany Avaratra dia misy fisehoan-javatra toy ny "jiro polar". Ny aurora na aurora (Aurora Borealis) dia famirapiratana voajanahary (luminescence) an'ny lanitra, izay hita miharihary, indrindra amin'ny latitude avo, dia vokatry ny fifandonana ireo poti-ketsa misy fiakarana ao amin'ny atôma ambony (thermosfera). Matetika, ny aurora dia manomboka amin'ny hazavana marevaka maitso mavana miseho amin'ny lanitra maizina. Mirehitra miandalana io hazavana io. Misy tady mamirapiratra hita eny amin'ny lanitra, izay miovaova, manitatra ary mampirehitra hatrany. Ny taratra maivana dia manjelanjelatra miaraka amin'ny loko rehetra amin'ny avana. Ny aurora dia matetika tazana amin'ny ririnina, raha fohy ny ora antoandro ary lava ny alina.
Tena sahirana ny flora amin'ny Arctic, noho ny mari-pana ambany. Ny zavamaniry lehibe ao amin'ny Arctic dia hazo rofia, voamadinika, ahitra, mosses ary lichens. Misy karazana mosses miisa 1100 eo ho eo.
Ny Arktika dia fonenan'ny biby miavaka maro. Eto no ahitanao: omby musk, reindeer dia, bera polar ary ondry bighorn, lemmings, amboahaolo arctic. Ny ranomasina Arktika dia misy karazan-trondro, tombo-kase, walrus, belugas ary karazan-trondro sarobidy (misy karazana trondro 450).
Natsangana ny fiarovana sy ny valan-javaboarim-pirenena mba hiarovana ny tontolo voajanahary.
Noho ny toe-piainana henjana, ny Arctic dia zara raha misy mponina. Vazimba teratany: Eskimos, Sami, Chukchi, Nenets, Evenki, Aleuts, Finns, Ougariana sy ny hafa. Ao amin'ny American Arctic dia mipetraka i Eskimos sy Inuit. Any amin'ny faritra avaratr'i Alaska sy andrefan'ny Canada, Dene Indianina. Any avaratry Eurasia, Sami, Chukchi, Nenets no mipetraka. Ny olon'ny Artika dia manana ny kolontsain'izy ireo taloha, ny fivavahana, ny fiteny, ny fahatsiarovan-tena. Asa ifotony: famerenan-jaza sy ny jono an-dranomasina.
Ny faritany misy fanjakana 8 dia any amin'ny Tendrontany Avaratra - Russia, USA, Canada, Denmark, Norvezy, Sweden, Finlandy ary Islandy. Ny dimy voalohany amin'izy ireo dia subarctic, satria ny faritaniny dia mifanila mivantana amin'ny Arktika, ary noho ny toerana misy azy ireo ara-jeografika sy ara-tantara dia manana zon'ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny habaka Arctic. Raha ara-jeografika, ny Arctic dia mizara ho faritra: ny faritra Kanadiana, ny faritra Rosiana, Alaska, Greenland, Spitsbergen (Svalbard), Fennoscandia, Islandy.
Ny fanjakana Arctic valo natsangana tamin'ny taona 1996 ny Arctic Council - vovonana iraisam-pirenena an'ny fanjakana boribory, izay mamaha ny laharam-pahamehana amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy maharitra any amin'ny faritra, manatsara ny fahasalamana sy ny fiadanam-bahoaka rehetra ao amin'ny Arctic.
Ao amin'ny Arctic dia mihoatra ny am-polony ny expeditions iraisam-pirenena, foiben'ny radio ary onjam-peo.
Ny firenena eropeana dia mpikambana ao amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena isan-karazany, ao anatin'izany ny Filankevitra Eropeana, ny Vondrona Eropeana, NATO, OSCE, ny Dokotera Nordic, ny Commonwealth of States Independent. Ny fandaminana dia mamaritra ny fizotry ny toekarena, sosialy ary politika ary ny toerany eo amin'ny sehatra an'izao tontolo izao.
Ny anjara toerana voalohany amin'ny sehatra politika any Eropa dia nilalao tany Alemana, Frantsa, Grande-Bretagne ary Italia. Firenena sosialista teo aloha noho ny fandraisana anjara amin'ny Vondrona Eropeana dia manantena ny hanatsara ny toe-piainan'izy ireo. Ny ivon'ny tsy fahazoana antoka dia mijanona ao amin'ny Saikinosy Balkan, izay mbola nipoitra ny toe-javatra nifandonan'ny fifandonana nandritra ny fianjeran'i Yugoslavia.
Miaraka amin'ny fihenan'ny fikorianan'ny mpifindra monina dia tafapetraka tampoka ny fanontaniana momba ny fampidirana bebe kokoa amin'ny fiarahamonin'ireo izay efa mipetraka any amin'ny Vondrona Eoropeana. Ny fanaratsiana ara-politika, ny toekarena tsy mahasalama, ny ady any Afovoany Atsinanana, ny korontana any Afrika Avaratra, ny ady ataon'ny miaramila any Ukraine, ny fitomboan'i Sina ary ny zavatra hitranga amin'ny ho avy - izany rehetra izany dia misy fiantraikany amin'ny toe-draharaha politika eto amin'ny Tontolo Taloha, manova ny fototra ary manamarina ny tanjaky ny demokrasia sy ny zon'olombelona.